चुनावको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमै हुने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको चुनावको मतगणना सम्बन्धित केन्द्रमा नै गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मतपेटिका ओसार पसार गर्दा सुरक्षामा जटिलता आउनसक्ने भएकाले स्थानीय तहको केन्द्रमा नै मतगणना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
२८३ वटै स्थानीय तहमा एकसाथ मतगणना हुने निर्वाचन आयोगका....
निर्वाचन बिथोल्न सक्ने ‘गुन्डा’ प्रहरीको निगरानीमा
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि अवरोध आउन नदिन प्रहरीको सुरक्षा तर्फ ध्यान आर्कषण भइरहेको छ ।
प्रहरीले निर्वाचन बिथोल्न प्रयासका साथै सुरक्षामा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’हरूको सूची तयार पारी निगरानी सुरु गरेको छ।
गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूरहेका व्यक्तिहरुको नामको सूची तयारपारी....
राउटेको कुलपूजा गर्न प्रधानमन्त्रीबाट पाँच लाख
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राउटेहरुको कुलपूजाको लागि पाँच लाख रुपैया सहयोग गरेका छन् । आगलागीमा परी उपचार गराइरहेका दैलेखका कपिल शाहीको उपचारका लागि समेत भनेर पाँच लाख रुपैया दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाँच लाख रुपैया सहयोग गरेको हो ।....
मेयर देखि वडाध्यक्ष सम्म कसको तलब कति ?
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा मासिक तलबको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक तलब पाउने भएका छन् । ऐनको मस्यौदा संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।....
संसद् बैठक स्थगित, अब चुनावपछि मात्र बस्ने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको बैठक आगामी जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आज दिउँसो १ बजे नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्ने भनिएको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन पछिसम्मका लागि स्थगित भएको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीले आज विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुक अत्यन्त गम्भीर....
रञ्जुको चुनाव चिन्ह स्टकोट
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुलाइ प्रचार प्रसार गर्न पाउने ६ दिन अघि शुक्रबार मात्रै चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ । विवेकशील नेपाली पार्टीकी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार रञ्जु न्यौपाने (दर्शना)लाई चुनाव चिन्ह इस्टकोट प्रदान गरिएको छ । काठमाडौं महानगरको मेयर उम्मेदवार २१....
सुशीला कार्की अदालत फर्कने
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुशीला कार्कीलाई काममा फर्काउन आदेश दिएपछि उनी आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्कने भएकी छिन् ।
कार्कीले आफ्नो कार्यभार फेरि सुरु गर्ने सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । सर्वोच्चले शुक्रबारबाटै कार्यमा फर्काउन आदेश दिए पनि शुक्रबार कार्यालय समय सकिएको र....
वरिष्ठ साहित्यकार शर्माको निधन
काठमाडौं । वरिष्ठ साहित्यकार श्यामप्रसाद शर्माको ९८ वर्षको उमेरमा आज विहान निधन भएको छ । अल्जाइमरलगायत रोगबाट पीडित शर्माको आज बिहान ४ बजे कमलादीस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको छ । नेपाली प्रगतिशील साहित्यिक क्षेत्रका अगुवा शर्मा प्रगतिशील लेखक संघका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । शर्मा राणा....
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस–माओवादीमा तनाव
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्किन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि महाअभियोगका प्रस्तावक नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र छलफलमा जुटेका छन् । यो प्रस्तावलाई पारित गर्न संसदमा दुई तिहाई नपुग्ने अवस्थामा आएको सर्वोच्चको यस्तो फैसलाले काँग्रेस–माओवादीलाई थप समस्यामा पारेको....
रंगेहात समातिए उड्ययनका उपसचिव
काठमाडौं । अवैध सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उपसचिव किशोर कुमार खत्री पक्राउ परेका छन् । खत्री नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका कर्मचारी हुन् ।
उनीसहित अन्य दुई जनासमेत पक्राउ परेका छन् । उनीहरु ४० तोला सुनसहित पक्राउ परेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । कतार एयरको....
‘सावधान ! कोरोना’ : किसान सायोङ्ग
बराहक्षेत्रमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सह–चालकको मृत्यु
मोरङमा लकडाउन उलंघन रोक्न खोज्दा कांग्रेस नेतामाथि छुरा प्रहार
धरानमा आगलागी हुँदा १५ बाख्रा जल्यो
२०७६ चैत्र २२ गते शनिबारको राशिफल